IFirefox kunye neLibreOffice: Uzisebenzisa njani iinguqulelo ezintsha ngeAppImage | Ukusuka kwiLinux
IFirefox kunye neLibreOffice: Uzisebenzisa njani iinguqulelo ezintsha ngeAppImage
Ukufaka i-Linux Post | 13/05/2022 06:00 | Izicelo, Izifundo / iincwadi / Iingcebiso
Xa sisebenzisa nayiphi na ikhompyuter, emsebenzini nasekhaya, 2 kwezona ntlobo zibalulekileyo nezisetyenziswayo zezicelo zihlala zi Iibhrawuza zewebhu kunye neeSuite zeOfisi. Yiyiphi ingqiqo ngokugqibeleleyo kwaye esebenzayo, ukususela i-avareji yomsebenzisi wekhaya okanye weofisi, ngokuqhelekileyo usebenzisa ezi kunye predilection. Nokuba kukukhangela kwaye ukufaka, ukukhuphela okanye ukujonga ulwazi. Okanye, ukuvula, ukwenza, ukulungisa kunye nokuprinta iifayile zeefomathi ezahlukeneyo kwiimfuno zakho kunye neemfuno.
Ngoko ke, izicelo ezifana Firefox kunye ne-Free Office kwiinguqulelo zabo ezintsha, bakholisa ukuba ikakhulu kwi GNU / Linux kubaluleke kakhulu. Kwaye ngenxa yale njongo, ukusetyenziswa kwe iifayile zokufakela zohlobo lwe-AppImage, njengoko siza kubona ngezantsi.
Izongezo eziphezulu ezili-10 zokufezekisa eyona Firefox ilungileyo nekhuselekileyo
Kwaye njengesiqhelo, ngaphambi kokuntywila kwisihloko sanamhlanje malunga nokusetyenziswa kwe Firefox kunye ne-Free Office kwiinguqulelo zayo ezintsha, ngokusetyenziswa kweefayile kwi-.AppImage ifomathi, siya kushiya abo banomdla ezi linki zilandelayo kwezinye iimpapasho ezinxulumene ngaphambili. Ngendlela yokuba banokuziphonononga ngokulula, ukuba kuyimfuneko, emva kokugqiba le mpapasho:
"IFirefox ihlala isisikhangeli sewebhu esingagqibekanga sabaninzi, phantse kuyo yonke into edla ngokwenziwa kwi-Intanethi kwi-GNU/Linux, yomibini umsebenzi kunye nokuhambisa ixesha. Ke ngoko, ukwazi ukuba zeziphi izongezo okanye izandiso (iiplagi) zikuvumela ukuba ube nesikhangeli sewebhu esikhawulezayo, esinezinto ezininzi, esivelisayo kunye nesisebenzayo kubaluleke kakhulu kwaye luncedo.". Izongezo eziphezulu ezili-10 zokufezekisa eyona Firefox ilungileyo nekhuselekileyo
IFirefox 99 ifika nophuculo, ukulungiswa kwebug nokunye
I-LibreOffice 7.3 ifika nenani elikhulu lophuculo kunye neempawu ezintsha
1 IFirefox kunye neLibreOffice: IiNkqubo eziBalulekileyo kulo naluphi na uSabelo
1.1 Kutheni usebenzisa iinguqulelo zangoku zezicelo ezithile kwiDistros yakudala?
1.2 Uyifaka njani iFirefox usebenzisa iAppImage?
1.3 Uyifaka njani iLibreOffice usebenzisa i-AppImage?
IFirefox kunye neLibreOffice: IiNkqubo eziBalulekileyo kulo naluphi na uSabelo
Kutheni usebenzisa iinguqulelo zangoku zezicelo ezithile kwiDistros yakudala?
Icandelo elikhulu labasebenzisi lithanda ukusebenzisa I-Distros ngeNkxaso eyandisiweyo (LTS). Abanye, kwaye ngokuqinisekileyo uninzi, bahlala benalo I-GNU / Linux Distros ukuba ekuhambeni kwexesha bayeke ukufumana uhlaziyo oluqhelekileyo kunye nokhuseleko. Ngaphezu kwako konke, kwizicelo ezithile ezibalulekileyo okanye ezibalulekileyo, ezinje, Firefox kunye ne-Free Office. Okanye bawafumana ngamaxesha okwandayo.
nto leyo enyanzela abaninzi ukuba tshintsha uguqulelo okanye unikezelo, ukuze kufumaneke okuyimfuneko iinguqulelo ezihlaziyiweyo kwezi zicelo kunye nezinye ezininzi. Nangona kunjalo, kwabanye oku kusenokungabi lula okanye kunqweneleke, okt ukufuduka. Kwaye ngenxa yoko, kuyathandeka ukuba bazame ukukwazi ukufikelela kwezi nguqulelo ziphucukileyo kunye nezangoku ngeendlela ezamkelekileyo.
Ukusukela, iinguqulelo ezintsha okanye zanamhlanje, ngokuqhelekileyo nikela ngeyona nto inokwenzeka yabo, kunye ukuhambelana okunokwenzeka ngeewebhusayithi zomntu wesithathu kunye neefayile. Ngamaxesha amaninzi, zenziwe ngetekhnoloji yobunikazi kunye nevaliweyo.
Ke, kweli candelo lokugqibela labasebenzisi, nge i-distros endala o I-Distros engenazo iiphakheji zesicelo zamva nje, ukusetyenziswa kwe Iiphakheji ze-AppImage yeyona nto ifanelekileyo. Kuba, ifilosofi yayo yengqesho inokuhlelwa njengento ephathekayo kwaye izimele ngokupheleleyo. Ngelixa abanye bethanda Qhobosha okanye i-Flatpack, azikho kangako.
Uyifaka njani iFirefox usebenzisa iAppImage?
Ukufaka ifayile Isikhangeli sewebhu seMozilla Firefox kwifomathi ye-AppImage kuguqulelo lwayo lwamva nje, oku kulandelayo kuyafumaneka Ikhonkco elisemthethweni le-AppImageHub Store. Okanye ngokuthe ngqo, ukusuka kule enye ikhonkco le-github.
Nje ukuba ikhutshelwe, kwaye yabelwe imvume yokuphumeza njengoko iphunyezwa kwifayile ephunyezwayo, siya kuba nakho ukuba noguqulelo olusemthethweni lwamva nje ngaphandle kwayo nayiphi na ingxaki, siphumeze ngonqakrazo kabini olulula lwemouse.
Umzekelo, kwimeko yam yobuqu, ndizamile inguqulelo yamva nje ezinzileyo ye Isikhangeli sewebhu seMozilla Firefox ngaphaya kwe Inkqubo yokusebenza esekwe IDebian 8 (ebizwa ngokuba yiCanaima 5) kwaye isebenze ngaphandle kwengxaki, kwaye iphelele ngeSpanish. Njengoko ubona ngezantsi:
Uyifaka njani iLibreOffice usebenzisa i-AppImage?
Ukufaka ifayile I-LibreOffice Office Suite kwifomati ye-AppImage kuguqulelo lwayo lwamva nje, oku kulandelayo kuyafumaneka ikhonkco elisemthethwenil kwiwebhusayithi yeLibreOffice ngokwayo.
Umzekelo, kwimeko yam yobuqu, ndizamile inguqulelo yamva nje ezinzileyo ye Suite yeOfisi yeOfisi ngaphaya kwe Inkqubo yokusebenza esekwe IDebian 8 (ebizwa ngokuba yiCanaima 5) kwaye isebenze ngaphandle kwengxaki, kwaye iphelele ngeSpanish. Njengoko ubona ngezantsi:
Kwakhona, ndizamile zombini. Iifayile ze-AppImage ngaphaya kwe Inkqubo yokusebenza esekwe I-Debian 11 (ebizwa ngokuba yiMX-21) kwaye isebenze ngaphandle kwengxaki, kwaye iphelele ngeSpanish.
Ngamafutshane, ukuba neenguqulelo zamva nje nezihlaziyiweyo ze "Firefox kunye neLibreOffice" kwi-GNU/Linux Distros yangoku esetyenziswa ngumntu wonke, nokuba indala kakhulu okanye yangoku, ngokusetyenziswa kweefayile kwi. Ifomathi yefayileYinto ekhawulezayo nelula. Kwaye ngokuqinisekileyo, oku kuya kuthintela, ukuya kwinqanaba elikhulu, i ukuphelelwa lixesha kunye nokulahlwa ezininzi I-GNU/Linux distros engasaxhaswanga kwaye ihlaziywe.
Siyathemba ukuba olu papasho luluncedo kakhulu kumntu wonke «Comunidad de Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux». Kwaye ungalibali ukuphawula ngayo apha ngezantsi, kwaye wabelane ngayo nabanye kwiiwebhusayithi zakho ozithandayo, amajelo, amaqela okanye uluntu lwenethiwekhi yoluntu okanye iinkqubo zemiyalezo. Ekugqibeleni, tyelela iphepha lethu lasekhaya ku «UkusukaLinux» ukuphonononga ezinye iindaba, kwaye ujoyine ijelo lethu elisemthethweni Umnxeba ovela kwiDesdeLinux, Bucala ngasekunene iqela ngolwazi oluthe kratya ngalo mbandela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izicelo » IFirefox kunye neLibreOffice: Uzisebenzisa njani iinguqulelo ezintsha ngeAppImage
Ukwazi iLibreOffice: Intshayelelo kuMsebenzi ophambili woMsebenzi
Weron a VPN esekwe kwiprotocol yeWebRTC